Ogaden News Agency (ONA) – Tacadiyo Baahsan oo Ciidanka Gumaysiga Itoobiya Ka Fuliyay Ogadenya.
Tacadiyo Baahsan oo Ciidanka Gumaysiga Itoobiya Ka Fuliyay Ogadenya.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia ayaa ka warbixinaya tacadiyadii ugu dambeeyay ee ciidanka
wayaanuhu ugaysteen shacabka biri magaydada ah ee Soomaalida Ogadenia, tacadiyadan oo isugu jira Dil, Xidhay iyo Dhaawac ayaa udhacay sidan.
Warku wuxuu sheegayaa in markay taariikhdu ahayd 20/9/2016 deegaanka lagu magacaabo Dusmo oo Degmada Awaare ee Gobolka Jarar katirsan ay ciidamada nacabka ah ee wayaanuhu ku dileen Allaha unaxariistee wiil lagu magacaabi jiray Ina Axmad Boogaale.
Isla taariikhdaas waxaa meesha la yidhaahdo Meermeersane oo Degmada Awaare katirsan ay ciidanka gumaysigu xidhay iyo dhac isugu dareen muwaadin lagu magacaabo Xassan Maxamad Aadan, waxayna xidhay kadib kadhaceen 100 adhi ah iyo geel badan.
Sidoo kale warkan ayaa intaas ku daraya in 22/9/2016 deegaanka loo yaqaano Daawadiid oo Degmada Dhuxun ee
Gobolka Nogob katirsan ay ciidanka cadawgu ku xidh xidheen dadka kala ah:-
1 xassan makhtal barkhadle
2 cawaale maxamad xaashi
3 maxamad deeq sahal
4 gordo cabdi
5 anas xassan
6 khadar cabdulaahi.
Dhinaca kale 23/9/2016 Dig oo Dagmada Awaare katirsan waxay ciidanka wayaanuhu ku xidh xidheen dad aad ubadan waxaana magacyadooda helay labo muwaan oo lagu kala magacaabo Maxamad Ganay iyo Ardo Badal.